Mpanamboatra sy mpamatsy kitapo fampiroboroboana - Orinasa fampiroboroboana bag any Sina
Ity kitapo tote ity dia vita amin'ny polyester 600D, izay mateza ary hiaro ny zavatrao amin'ny toe-javatra tsara. Ny fahaiza-manao dia manodidina ny 11L, afaka mitazona boky vitsivitsy, kitapom-batsy, telefaona finday, mpamatsy herinaratra, solomaso sns sns ho an'ny asa, ivelan'ny trano, orinasa ary fialamboly. Loko maro ho an'ny safidinao. Toa tanora izany. Kitapo paosy eo alohan'ireo zavatra madinidinika. Mety aminao ny mamoaka zavatra. Isan-taona dia manome modely vaovao 50-100 ho an'ny mpanjifa eran-tany izahay. Volavola namboarina koa wel ...
Kitapo mpitondra hafatra misy loko maro ho fampiroboroboana
Waterproof Messenger Bag dia vita amin'ny polyester 600D, izay mateza ary hiaro ny zavatrao amin'ny toe-javatra tsara na dia amin'ny andro orana aza. Ny fahaiza-manao dia manodidina ny 13L, afaka mitazona laptop 14 inch, boky vitsivitsy, kitapom-batsy, telefaona finday, mpamatsy herinaratra, solomaso sns sns ho an'ny asa, ivelan'ny trano, orinasa ary fialamboly. Ny fehikibo azo ampiasaina amin'ny soroka dia afaka mampihena ny havizanan'ny soroka hahatonga anao hahazo aina. Loko maro ho an'ny safidinao. Toa tanora izany. Kitapo harato ho an'ny zavatra kely sasany. Mety aminao ...
kitapo fampiroboroboana misy loko maro
Promosi Backpack dia vita amin'ny polyester 600D, izay mateza ary hiaro ny zavatrao amin'ny toe-javatra tsara na dia amin'ny andro orana aza. Ny fahaiza-manao dia manodidina ny 15L, afaka mitazona laptop 14 inch, boky vitsivitsy, kitapom-batsy, telefaona finday, mpamatsy herinaratra, solomaso sns sns ho an'ny asa, ivelan'ny trano, orinasa ary fialamboly. Ny fehin-tsoroka malemy amin'ity kitapom-batsy ity dia afaka mampihena ny havizanan'ny soroka mampitony anao. Loko maro ho an'ny safidinao. Toa tanora izany. Paosy harato ho an'ny rano tavoahangy sy paosy aloha ho an'ny sipa ...
Ny fampiroboroboana ny 6 dia afaka mangatsiaka mangatsiaka kokoa amin'ny kitapo
Ity kitapo mangatsiaka fampiroboroboana ity dia ho an'ny 6 kanety. Ny fitaovana ivelany dia polyester 600D / 300D miaraka amin'ny PVC mifono izay mateza be. Ny sarony dia mety ho PEVA fotsy, PEVA volondavenona na foil volafotsy izay azo antoka amin'ny fifandraisana amin'ny sakafo sy fanadiovana mora amin'ny lamba mando. Azo soratana eo am-paosy aloha ny sary famantarana anao. Matetika izahay dia mampiasa sombin-kazo EPE matevina 3mm eo anelanelan'ny ivelany sy ny lamba fisoratana mba hafana na hatsiaka. Mazava ho azy fa afaka mampiasa iray matevina kokoa ianao. Isan-taona dia manome modely vaovao 50-100 ho an'ny mpanjifa eran-tany izahay. Desig namboarina ...
Waterproof Messenger Bag dia vita amin'ny polyester jacquard 600D na 420D miaraka amin'ny fanohanan'ny PVC tsy misy rano, izay mateza ary hiaro ny zavatrao amin'ny toe-javatra tsara na dia amin'ny andro orana aza. Ny fitaovana dia Eco-friendly izay hanaraka ny fenitry ny EU sy Etazonia. Ny fahaiza-manao dia manodidina ny 13L, afaka mitazona laptop 14 inch, boky vitsivitsy, kitapom-batsy, telefaona finday, mpamatsy herinaratra, solomaso sns sns ho an'ny asa, ivelan'ny trano, orinasa ary fialamboly. Ny fehikibo azo ampiasaina amin'ny soroka dia afaka mampihena ny havizanana amin'ny soroka ...
Kitapo kitapo fehin-tànana ho an'ny fampiroboroboana amin'ny loko maro
Ity kitapo misintona ity: Misy tadiny 2 ny lafiny tsirairay ary ny zorony ambany dia nohamafisina tamin'ny webbing PP. Misy tadiny 2 isaky ny lafiny. Azonao atao ny misintona ny kofehy hanidiana ny kitapo, avy eo mety ho kitapo. Kitapo kitapo fanatanjahantena: 42cm ny lavany ary 35cm ny sakany, mety amin'ny fitehirizana boky, kiraro, akanjo, tsakitsaky, izay ilaina isan'andro. Loko isan-karazany, mety amin'ny fotoana isan-karazany, toy ny fety, filasiana, fiantsenana, bisikileta, fitsangantsanganana ary fitsangatsanganana isan'andro. Na zaza ianao, olon-dehibe na ...